Yunivarsiitii Mattuutti barnoonni erga addaan cite torban dabre – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYunivarsiitii Mattuutti barnoonni erga addaan cite torban dabre
(.bbcafaanoromoo)–Barattoonni naannoo Tigraay doorsisa irraan gahaa jiru baqachuun mooraa Yuniivarsiitichaa gadhiisanii bahuusaanii BBCf dubbataniiru. Bulchiinsi yuniivarsitii Mattuu gamasaaniitiin, sababni barattoonni kunneen mooraa gadhiisanii bahaniif tokkollee hinjiru jedhaniiru.
Barattoonni BBCn dubbise waan jedhan, dhalattoota naannoo Tigraay tahan qofti barattoota birootiin sakkatta’amaa turan jedhu. Kanumarraa ka’uunis yuniivarsiiticharraa magaalaa km 150 irratti kan argamtu, Gaambeellaa deemuun torban tokko turaniiru.
Ergasiis walgahii bulchiinsa yunivarsiitichaa, jaarsolii biyyaa, abbootii amantaa fi angawoota naannoo Gaambeellaa bakka jiranitti taasifameen, Roobii gara mooraa deebi’uuf ka’an. Haa tahu malee, mooraa akka gahan dhakaadhaan reebuu akka jalqaban, isaanis ofirra garagalanii akka deebi’an dubbatu.
Waa’ee taatee kanaas hogganaan biiroo Koominikeeshinii Oromiyaa Obboo Addisuu Araggaa, fuula feesbuukii isaanii irra barreessaniiru.
”Gochi yunivarsiticha keessatti barattoota muraasaan raawwatamaa jiru, duudhaa saba [Oromoo] waliin kan waldhiitudha,” jedhan.
Kana malees, ”Barattoonni Oromoo Yunivarsiitii Mattuu keessatti barattan, ilmaan Abbaa Gadaa ta’uu keessan gochaan mirkaneessuu qabdu,” jechuun akka gocha kanarraa of qusatanis dhaamaniiru.
Magaalaan Godina Iluu Abbaabooraa, Mattuun, dhalattoonni saboota hedduu kan jaalalaan keessatti jiraatan ta’uu kantiibaan magaalattii Obboo Hayiluun ni dubbatu.
Magaalaa Mattuutti waldhabdeen yookaan shakkiin sabarratti hundaa’an hin jiran jedhu Obbo Hayiluun. Walgahii torban muraasaan dura taasifaman irratti, eeruu taasifameen, manneen namootaa sakkatta’ameera.
Sakkatta’insa magaalaa keessa taasifameen barattoota Oromoo fi Tigree tahan gidduutti shakkiin akka uumamu taasiseera jedhu. Kana malees, barattoonni Oromoo, sodaa qabna jechuun mana ciisichaa barattoota Tigree tahan sakkatta’uu isaaniis dubbatan. Kunis barattoota gidduu shakkiin akka uumamu taasiseera.
Image copyrightFACEBOOK/M.E.U FUNS
Torban dabre Kamisa Mattuurraa Gaambeellaa kan imale Abrihaan, yeroo hiriirri mormii taasifamu, ‘Barattoonni Tigree mooraa gadhiisanii nuuf haa bahan,” gaaffiin jedhu akka ka’u dubbata.
”Gara mana ciisichaa keenyaa dhufuun, ‘Isin shakkamtoota, boombii qabattaniittu, isin sakkatta’uufis heeyyama qabna,’ nuun jedhu” jedha.
Hogganaaan Waajjira Kominikeeshinii Yunivarsiitichaa Obboo Olqabaa Asaffaa ammoo, ‘kun sirrii miti,’ jedhu.
Obboo Olqabaan, barattoonni mooraa dhiisanii bahan dhibbaa kan hincaalle ta’uu himanii, mooraa gadhiisanii bahuufis ‘Sababni gahaa ta’e hinturre, sochiin sodaaf saaxilu hinturre; ammas taanaan hinjiru,” jechuun BBCf himan.
Akka jecha Abrihaatti barattoonni 15 deebi’uu hin barbaannu jechuun gara Finfinnee imalaniiru.
Hoggantoonni Yuunivarsitichaa fi qaamoleen dhimmichi ilaallatu rakkoo kana furuuf mari’achaa haa jiraatan malee, Abrihaan garuu ‘Nuti waan mararra lubbuu keenya barbaadna. Nuuf barnoonni lammatarra dhufa. Gara [Tigraay] deebi’uu barbaadna’ jechuun dubbata.
Obbo Olqabaanis, ‘Durayyuu akka isaan asii hindeemne tattaaffii taasisaa turre. Ammas taanaan akka isaan barnoota idilee isaaniirrati deebi’an taasisuuf, barsiisotaa fi barattoota waliin marii taasisaa jirra,” jedhan.
Baratoota Oromoo mormii taasisan keessaa tokko kan tahe Addunyaan (maqaansaa kan jijjiirame) isa tokko. Akka Addunyaan jedhutti, ‘Barattoonni Tigree tahan hin sakkatta’aman. Kunis hedduu nu shakkisiiseera,” jechuun BBCtti himeera.
‘Pireezidantiin Yunivarsiitichaa kaayyoo jaarmiyaa kanaaf amanamoo miti. Kunis bulchiinsa isaanii irratti shakkii akka qabaannu nu taasiseera,” jedha Addunyaan. ‘Kanaafis aangoo isaanii akka gadhiisan gaafanneerra.” jedha.
Image copyrightFACEBOOK/ADDISU AREGA
Hogganaan biiroo Koominikeeshinii Oromiyaa Obboo Addisuu Araggaa, fuula feesbuukii isaanii irratti Jimaata gara galagalaa waan barreesaniin, ”Gaaffiiwwan mirgaa barattootaan ka’an furuuf qaamonni dhimmi ilaalatu furmaata akka kennan kallattiin kaa’ameera,” jeadhanii barnootni addaan citee ture Wiixataa ALI Sadaasa 4 bara 2010 eegaluuf walii galamusaas ibsaniiru.